The Man from Nowhere (2010) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 7.8/10 60842 votes
Baek Su-Ryeon, Kim Hee-won, Kim Hyo-seo, Kim Sae-ron, Kim Sung-oh, Kim Tae-hoon, Lee Jong-pil, Song Young-chang, Thanayong Wongtrakul, Won Bin
မွနျမာပရိတျသတျကွီးရဲ့ ငယျကြှမျးဆှမေငျးသားကွီးလဲဖွဈ မွနျမာပွညျသူအသဲနှလုံးကို ရိုကျခတျခဲ့တဲ့ <<<ဆောငျးရှကျဦးရှကျကွှေ ခဈြသကျသေ>>>ဇာတျကားမှ မငျးသား ထယျစောကျ လို့လူသိမြားတဲ့မငျးသား(원빈 ) ရဲ့ ကြျောကွားတဲ့ ဇာတျကားလေးတဈကားနဲ့မိတျဆကျပေးပါရစေ။
ဒီဇာတျကားဟာဖွငျ့ ကိုရီးယားမှာ ရုံတငျပွသရာမှာ ၄ပတျထဲနဲ့ ကွညျ့ရှူ.သူ ၄,၀၄၇,၂၂၇ ကြျောခဲ့လို့ စံခြိနျတငျဇာတျကားတဈကားဖွဈရပျတညျခဲ့ပါတယျ ။
ဒီဇာတျကားကို ညှနျးပေးရငျပေါ့သှားမလားပဲ။ မငျးသားထယျစောကျ(원빈) ဟာ တဈကားလုံးမှာ စကားပွောတာ ကြှနျတေျာ့အထငျ အခှနျး၂၀ ထကျပိုမယျ လို့မထငျပါဘူး။
မငျသား 원빈ဟာ အစိုးရလြှို့ ဝှကျအဖှဲ.စညျးမှ အထူးလကေ့ငျြ့ထားတဲ. အဂေငျြ့တဈယောကျပါ သူ.ဇနီးသညျနှငျ့သူ့အားခြောငျးမွောငျးလုပျကွံခံရပွီး ဇနီးသညျမှာ နရောမှာပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးခဲ့ပါတယျ မငျးသား ခနျြတရှေီ့း(원빈)ကတော့ဒဏျရာမြားဖွငျ့ အသကျမသပေဲလှတျမွောကျခဲ့ပွီးဇာတျမွုတျနခေဲ့ရာ ကလေးတဈယောကျကို ခငျတှယျရာမှ မမြှျောလငျ့ပဲ ရကျစကျကွမျးကွုတျသောလူဆိုးဂိုဏျးနှငျ့ထိပျတိုကျ တှခေဲ့ကွပုံကို ခပျကွမျးကွမျးကွညျ့ရှူ.ကွရမှာပါ။ IMDb Rating မှာ 7.9 ရထားလို့မကောငျးမှာတော့ပူစရာမလိုဘူး ထငျပါတယျ …………………..။
မြန်မာပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ ငယ်ကျွမ်းဆွေမင်းသားကြီးလဲဖြစ် မြန်မာပြည်သူအသဲနှလုံးကို ရိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ <<<ဆောင်းရွက်ဦးရွက်ကြွေ ချစ်သက်သေ>>>ဇာတ်ကားမှ မင်းသား ထယ်စောက် လို့လူသိများတဲ့မင်းသား(원빈 ) ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ဒီဇာတ်ကားဟာဖြင့် ကိုရီးယားမှာ ရုံတင်ပြသရာမှာ ၄ပတ်ထဲနဲ့ ကြည့်ရှူ.သူ ၄,၀၄၇,၂၂၇ ကျော်ခဲ့လို့ စံချိန်တင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီဇာတ်ကားကို ညွှန်းပေးရင်ပေါ့သွားမလားပဲ။ မင်းသားထယ်စောက်(원빈) ဟာ တစ်ကားလုံးမှာ စကားပြောတာ ကျွန်တော့်အထင် အခွန်း၂၀ ထက်ပိုမယ် လို့မထင်ပါဘူး။
မင်သား 원빈ဟာ အစိုးရလျှို့ ဝှက်အဖွဲ.စည်းမှ အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ. အေဂျင့်တစ်ယောက်ပါ သူ.ဇနီးသည်နှင့်သူ့အားချောင်းမြောင်းလုပ်ကြံခံရပြီး ဇနီးသည်မှာ နေရာမှာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ် မင်းသား ချန်တေ့ရှီး(원빈)ကတော့ဒဏ်ရာများဖြင့် အသက်မသေပဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးဇာတ်မြုတ်နေခဲ့ရာ ကလေးတစ်ယောက်ကို ခင်တွယ်ရာမှ မမျှော်လင့်ပဲ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောလူဆိုးဂိုဏ်းနှင့်ထိပ်တိုက် တွေ့ခဲ့ကြပုံကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းကြည့်ရှူ.ကြရမှာပါ။ IMDb Rating မှာ 7.9 ရထားလို့မကောင်းမှာတော့ပူစရာမလိုဘူး ထင်ပါတယ် …………………..။
Baek Su-Ryeon Kim Hee-won Kim Hyo-seo Kim Sae-ron Kim Sung-oh Kim Tae-hoon Lee Jong-pil Song Young-chang Thanayong Wongtrakul Won Bin
Baek Su-Ryeon Hong So-hee Jo Seok-hyeon Kim Hee-won Kim Hyo-seo Kim Sae-ron Kim Sung-oh Kim Tae-hoon Kwak Do-won Lee Jong-pil Nam Kyung-eub Song Young-chang Thanayong Wongtrakul Won Bin
Option 1 storage.msubmovie.com 562 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 562 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 562 MB SD (480p)
Option4storage.msubmovie.com 1.4 GB HD (1080p)
Option5yuudrive.me 1.4 GB HD (1080p)
Option6sharer.pw 1.4 GB HD (1080p)
Option 8 yuudrive.me 3.3 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option9sharer.pw 3.3 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Guardians (2017) 2017